BUDDHIST TERMS' Dictionary: SEASONAL OFFERING OF ROBES - ကထိနစီဝရ
SEASONAL OFFERING OF ROBES - ကထိနစီဝရ
SEASONAL OFFERING OF ROBES Kathinacivara
ကထိနစီဝရ - ကထိန်သင်္ကန်း၊ ကထိန်ကံဆောင်ရန် လှူအပ်သော သင်္ကန်း။
ဘုရားရှင်လက်ထက်က ပါဝေယျတိုင်းသား ဘဒ္ဒ၀ဂ္ဂီညီနောင်သုံးကျိပ်တို့အား အကြောင်းပြု၍ သံဃာတော်များ သင်္ကန်းလုံလောက်ရန် ကထိန်သင်္ကန်းအလှူခံခွင့်ပြုထားသည်။ ကထိန်ခင်းရန်ခွင့်ပြုသော ရက်အပိုင်းအခြား သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တစ်လသာ ဖြစ်သည်။ ကထိန်သင်္ကန်းကို အမိအဖတို့ထံမှသော်လည်း အလှူမခံရပါ။ သဒ္ဓါအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသော သင်္ကန်းဖြစ်မှ သိမ်အတွင်း ၀ါဆိုသံဃာများစုဝေး၍ ကမ္မ၀ါရွတ်ဖတ်ပြီး ကထိန်ခင်းရသည်။ သင်္ကန်းလှူသောအခါ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မလှူရ။ သံဃာကို ရည်ညွှန်းလှူရသည်။ သံဃာ့အစည်းအဝေး၌ သင်္ကန်းရှားပါးသော ရဟန်းအား ထိုကထိန်သင်္ကန်းကို ပေးရသည်။ လှူသောသူရော ခံယူသူရဟန်းပါ အကျိုးငါးမျိုး ရရှိသည်။
Kathina civara; robes offered to the saṁgha for holdingakathina ceremony.
Offering of kathina robes had its origin toagroup of bhikkhus known as the Bhaddavaggi Brothers of Paveyya region. The Buddha allowedaspecial form of offering of robes to the members of the Order who were in need of robes. One-month period from the first waning day of Thadingyut (October), the end of the monsoon rains-retreat period, to the fullmoon day of Tazaungmon (November) was prescribed during which kathina robes may be offered. This special offering is to be purely voluntary. Bhikkhus are not supposed to ask for such donation even from their own parents. Robes are offered to the Order and not to any individual bhikkhu. These are placed before those members of the Order who have observed their rains-retreat period andaprescribed ritual is held inasima by the saṁgha before disposing them of in the presence of the assembly to the needy members. This special offering of robes brings five kindsof benefit to the donors as well as to the recipients.